Nampikorontana Ny ‘Nadeshiko Japan’ Tamin’ny Fiandohan’ny Fiadiana Ny Amboara Eran-tany Vehivavy FIFA Ilay Ratra Ratsy Vintana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2015 12:27 GMT
Nadeshiko Japan, ekipam-pirenena vehivavy Japone. Dikasary avy amin'ny YouTube ôfisialin'ny JFA .
Vaoavo farany: Resin'i Japana tamin'ny 2 no 1 i Kamerona tamin'ny Zoma 12 Jona (azo jerena eto ireo lalao nisongadina ). Japana no mitarika ao amin'ny vondrona C amin'ny lalao fiadiana ny amboara Erantany Vehivavy FIFA.
Na nandresy aza ry zareo tamin'ny lalao voalohany nataony, tamin'ity herinandro ity, tany Kanada dia miteraka olana kely amin'ireo fanantenan'i Japana amin'ny fiadiana ny Amboara Eran-tany vehivavy FIFA 2015 ny ratra nahazo ilay kintana iray.
Ny “Nadeshiko Japan” vehivavy Japone mpilalao baolina kitra no nahazo ny amboara eran-tany vehivavy tamin'ny 2011 tany Alemaina, nandresy tamin'ny 3 no 1 ny ekipan'i Etazonia tamin'ny tifitra mivantana rehefa nisaraka 2 no 2 ireo ekipa ireo tamin'ny fotoana ara-dalàna sy ny fanalavàm-potoana.
Tena malaza any Japana ny mpikatroka mavitriky ny ekipam-pirenena fantatra amin'ny anaram-bosotra hoe Nadeshiko Japan, sady mpilalao vehivavy voafantina ho mahay indrindra any Japana.
Vaovao manokana: Mifanamby amin'i Nadeshiko Japan ireo vehivavy mpilalao miady ny Tompon-daka Eran-tany! Hifandona amin'i Soisa, Kamerona ary Ekoatera ao amin'ny vondrona C ry zareo.
Nosintonina avy tamin'ny anaran'ny voninkazo nadeshiko sy ny fisainana ‘idealy’-n'ny vehivavy Japone ny anaran'ny ekipa vehivavy Japone.
Na avy amin'ny fanajàna faobe sy ny fanandratan'ny vahoaka Japone ireo mpandresin-dry zareo tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany aza ilay solon'anarana, ny Nadeshiko Japan kosa dia endriky ny sata samy hafa misy ireo vehivavy Japone. Tamin'ny fandehanana namonjy ny lalao Olaimpika 2012 dia niaraka tamin'ny sarambabem-bahoaka ny ekipa vehivavy raha toa ka nisitraka ny toerana mihaja ny ekipa lehilahy.
Nilaina ny hataka tamin'ny aterineto nataon'ireo mpanohana maherin'ny 20.000 tamin'ny 2012 mba handresena lahatra ireo mpikarakara ny lalao Olaimpika Japone mba hanondrotana ny Nadeshiko Japan ho any amin'ny toerana mihaja tamin'ny sidina fiverenana.
“Zara” raha nandresy an'i Soisa tamin'ny 1 no 0 ny Nadeshiko Japone tamin'ny nanombohany ny lalaony amin'ny fiadiana ny Amboara Eran-tany Vehivavy 2015, lalao voalohany nataony tao amin'ny vondrona C tamin'ny Alatsinainy 08 Jona 2015, tao amin'ny Kianja BC Place tany Vancouver.
#FIFAWWC Andro 3! Soeda v Nizeria, Kamerona v Ekoatera, Etazonia v AUS, Japana v Soisa ny antsipirihan'ny Lalao
Izao no nolazain'ny mpanohana iray ho valin'ny famintinana fohy ôfisialin'ny FIFA tamin'ny aterineto momba ny lalaon'i Japana sy Soisa :
Tena ratsy ny ampaham-potoana faharoan'i Japana. Tsara ho an-dry zareo ny nanantena iny andro iny ho andro fitsaharana, raha tsy izany dia handao ny fifaninana tsy ho ela ry zareo. Nanjary niraikitra ny teo afovoan'ny kianja rehefa nosoloana i Sawa, ary taorian'ny 45 mn voalohany, dia tsy afaka nifanolotra baolina mihoatra ny in-dimy ry zareo tamin'ny fanafihana iray ary mampatahotra ny fifehezany ny baolina.
Nanomboka nikorontana ny lalaon'ny ekipa Japone rehefa tapaka ny hato-tongotry ny kapiteny Kozue Ando tamin'ny antsasa-potoana voalohany.
Nangidy ny fahadisoam-panantenana taorian'ny nahatapahan'ny hato-tongotr'i Ando-n'ny Nadeshiko Japan sy ny fialàny amin'ny fiadiana ny Amboara Eran-tany. Nambaran'ny Fikambanan'ny Baolina Kitra Japone (JFA) tamin'ny 10 Jona fa taorian'ny fizahana ara-pahasalamana, dia amafisina fa tapaka ny hato-tongotra havian'ilay afovoan'ny kianja Kozue Ando
Raha nahatafiditra baolina tamin'ny penalty ilay mpiara-milalao Aya Miyama, i Ando kosa dia handao ny ekipa mifankazatra aminy ho any Kanada ka hody any Japana. Kapoka mafy ho an'ireo mpanohana maro ny ratra nahazo an'i Ando :
Argh… Tapaka ny hato-tongotr'i Kazue Ando ! nefa nanao izay rehetra azony natao izy ho an'ny Fiadiana Amboara Eran-tany amin'ity taona ity ! (。´Д⊂)
Tsikaritry ny sasany fa tena ho sahirana ny Nadeshiko Japan tsy misy Ando :
Tena mankarary ny tsy maintsy nialàn'i Ando izay kinga amin'ny fandrindrana ny lalao sy ny fanafihana noho ilay ratra ratsy vintana. Manana angovo betsaka ho azy i [Yuika] Sugasawa saingy milalao tsy misy paikady. Toy ny natoritory ny lalaon'i [Yuki] Ogimi tamin'ny antsasa-potoana faharoa, hany ka nihena ny isan'ny fanafihan'ny [Nadeshiko].
Hifandona amin'i Kamerona any Vancouver, Kolombia- Britanika amin'ny 7 ora hariva, i Japana, amin'ny lalao manaraka. Lalao izay heverina fa ho lava amin'ity andianà Amboara Eran-tany ity; nanamontsana an'i Ekoatera tamin'ny 6 no 0 i Kamerona tamin'ny 08 Jona, elanelan'isa lehibe indrindra ho an'ny ekipa Afrikana tamin'ny fiadiana ny Amboara Eran-tany.
Ny fandresen'ny Super Falcons Nizeriana an'i Soeda vao tamin'ny herinandro teo, sy ny fandresena miezinezina azon'i Kamerona, dia azo antenaina fa amin'ny farany dia hisy ekipa Afrikana handrombaka ny Amboara Eran-tany 2015.
Raha dinihana ny Fiadiana ny amboara Eran-tany 2015, heverina ho ny ekipa tsy maintsy resena ny tompondaka 2011, ny Nadeshiko Japan, noho izany hibanjina ny lalaon'i Kamerona sy Japana daholo ny maso rehetra amin'ny Zoma 12 Jona.